Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo [Sawirka: 8 February 2017 [AMISOM]
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cadullaahi Farmaajo ayaa isku diyaarinaya socdaal kale oo dibadda ah, xili uu maalin kahor kasoo laabtay booqasho saddex maalmood qaadatey oo uu ku tagey wadanka Eritrea.
Safarkan ayaa la filayaa in Madaxweyne Farmaajo uu ugu ambabaxo maalmaha soo aadan dalka Suudaan, sida laga soo xigtay Wasiiru dowlaha Madaxtooyadda Soomaaliya, Cabdiqaadir Maclin Nuur, oo la hadlay warbaahinta Suudaan.
Wafdi Farmaajo ayaa booqasho rasmi ah ku tagi doona magaalada Khartoum, halkaasi oo uu kula kulmi doono dhigiisa Madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashiir, oo ay kawada hadli doonaan xoojinta xiriirka labada dal iyagoo kala saxiixan doona heshiisyo cusub.
Tani ayaa noqonaysa booqashadii labaad oo uu Madaxweynaha Soomaaliya ku tago dalka Suudaan tan iyo markii uu xilka Madaxweyne-nimo loo doortay 8-dii Febuary, 2017-kii. Bishii October ee sanadkii 2017-ka ayuu Farmaajo booqday Suudaan.
Villa Soomaaliya wali fahfaahin kama bixin socdaalka Farmaajo ee Suudaan oo kamid ah dalalka carbeed ee dhinacyada amniga iyo waxbarashada ka taageera Soomaaliya, iyadoo labada wadan uu ka dhaxeeyo xiriir taariikhi ah.
Villa Somalia oo ka warbixisay kulamo uu Farmaajo la yeeshay madaxda Africa
War Saxaafaded 12.02.2019. 10:34
Madaxweynaha ayaa sheegaay in Somalia ay aad u daneynayso xilligan inay xiriir la yeelato...
Madaxweynaha Eritrea oo kusoo wajahan Muqdisho iyo wadooyinka oo la xiray
Soomaliya 13.12.2018. 08:38
Waa imisa Tirada Ciidanka Nabad ilaalinta Somalia u direyso South Sudan?
Soomaliya 25.11.2018. 12:39